Puerto Rico ọ nwere ezigbo enyi? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Cgba ígwè puerto rico - ajụjụ nkịtị
Cgba ígwè puerto rico - ajụjụ nkịtị
Puerto Rico ọ nwere ezigbo enyi?
Cygba ígwèna San Juan / Metro Mpaghara nkePuerto Rico
San Juan bụ ebe magburu onwe ya makaịgba ígwèna ezigbo uzo iji gafere obodo. Mpaghara Condado, Old San Juan, na Ocean Park niileigwe-enyi na enyiàjà ẹkedọhọdeịgba ígwèụzọ. More banyerena-agba ọsọna San Juan,Puerto Rico.
Kedu ihe dị na ndị otu Barrio Ọ bụ Jon na-abịakwute gị site na San Juan, Puerto Rico Ma nke a bụ otu n'ime obodo kachasị ama ama na America, mana mgbe oge gị siri ike ịchọrọ ịmara ebe ị ga-aga na ihe ị ga-eme mgbe ị bịarutere don 'echegbula, anyị nọ ebe a maka gị Taa ka m na-ekerịta ihe 10 ị kwesịrị ịme na njem ọzọ ị ga-aga San JuanJide n'aka na ị ga-elele isiokwu ahụ dum Ndepụta a dị ezigbo mmaVamosAnyị nọ na Playa EscambronNke a bụ ndị ọtụtụ ndị obodo tụrụ aro ka ọ bụrụ bụ naanị oge 5 nkeji Uber si Old San Juan. Ugbu a, anaghị m ekwu na ọ bụ osimiri mara mma n'obodo, mana ihe m na-ekwu bụ na ọ dị mfe n'ọtụtụ ebe ndị njem nleta na obodo, mmiri mara mma, ọ dị ọkụ? , ọ bụ ebe dị mma iji nọrọ otu awa ma ọ bụ abụọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ezumike ezumike ngwa ngwa tupu ịlaghachi na nlegharị anya ọ bụla Old San Juan bụ ebe UNESCO World Heritage na Ma eleghị anya, nkwụsị mbụ gị na San Juan Ugbu a, m na-akwado ịgagharị n'ezie ịbịa ? a flair for itAnd a great ideaM na-eme nke a n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo ọ bụla m gara na ụwa Ọ bụ njegharị Na-agagharị EgwuGaa Old San Juan Na-agagharị Na-agagharị Ọ na-amalite n'ụtụtụ Anyị nwere nnukwu onye na-eme njem nlegharị obodo Ọ maara ọtụtụ ihe banyere obodo ahụ ou ga-amụta banyere akụkọ ihe mere eme nke Juan na-aga ịmụ banyere Old San Juan na ụkpụrụ ụlọ ya. You ga-ahụ ọtụtụ n'ime ebe nlegharị anya kachasị elu n'ime obere awa abụọ, ọ dị m ka m matara obodo ahụ nke ọma na n'ezie .. ebe ọ bụ nwa amaala ọ nyere anyị ọtụtụ ezigbo ozi na ndụmọdụ gbasara ihe omume mgbe njem ahụ gasịrị na ọ bụ n'ọnụ dabeere Ya mere n'ezie ma ọ bụrụ na ị na-amasị njegharị n'ọnụ ha dị ka ọ ga-enyere na-azụmahịa ha na-aga otu n'ime ndị kasị mma zoro ezo bara nnukwu uru na ochie san juan ị nwere ike ịbanye na ihe ngosi nka ihe bụ $ 5 maka nnabata nke a bụ ụlọ obibi kacha ochie na america wuru na Afọ 1521N'ihi Ponce de LeonO ga-ebi ebe a Mana ọ nwụrụ tupu eComeỌ tụgharịrị gaa n'obí Gọvanọ Ugbu a ị nwere ike ịgagharị n'èzíNke a bụ akụkụ zoro ezo n'ezie ou nwere ogige ebe a Furu ọha na eze ma nweere onwe ya na Spanish hacienda Ọ bụ naanị ihe dị mma n'oge a mgbe ọ dị oke ọkụ n'èzí, chọta ndo gị n'èzí Site na Casa Blanca Naanị inwe mkparịta ụka dị mfe na Spanish ga-eme n'ezie njem gị na Puerto Ri ma ọ bụ na-eme njem ọtụtụ ebe ndị ọzọ na Latin America Ma ọ bụ ezie na m na di na nwunye bụ nwa nwanyị Mexico, m ka kwesịrị ịchacha Spanish m site n'oge ruo n'oge Achọrọ m ihe dị ọsọ ọsọ ma ọ bụghị nke na-agwụ ike ma ọ bụ ebe ahụ ka onye nkwado nke taa na-abata .. Babbel Ngwa mmụta asụsụ # 1 na ụwa Achọrọ m ihe ọmụmụ oke oke nke na-ewe naanị minit 10-15 ma ọ ka mma..nwere ike iji ya na ọnọdụ anọghị n'ịntanetị M gụrụ akwụkwọ na ụgbọ elu si New York ebe a ma ọ na - eme ka ntụkwasị obi m sie ike Ọ nwere nkwupụta okwu technologyN'ihi ya, ama m na ịkpọ okwu m na-eme bụ nke na-eme ka ihere ghara ime m mgbe m na-agwa ezigbo ndị obodo okwu, ọ bụ ụdị onye ahụ hụrụ ụzọ ochie nke ịmụ asụsụ Spanish na ụtọ na-agwụ ike Nke a dabara ndụ m ọtụtụ karịa Bido ịkwadebe maka njem gị na BabbelSign Ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ na-arụsi ọrụ ike dị ka m, Babbel bụ ụzọ zuru oke iji asụ Spanish ngwa ngwa Tụkwasị m obi na anyị nọ na fr ont of Casa Bacardi at the momentThe most premium rum distillery in the world Na m na-ekweta na ọ bụ nnọọ njem nleta ebe a, ma..Ọ bara uru na ọ ka .. Ugbu a ị nwere ike iji Uber ma ọ bụ tagzi ebe a .. ma ọ bụ I nwere ike ịga Pier 2 na Old San Juan ma kwụọ ụgwọ 50 iji were ụgbọ mmiri gaa CatanoNke ahụ na-ewe 10 nkejiỌ nwere echiche dị mma Mgbe ahụ ị nwere ike ịnweta tagzi maka 3 Were dollar US kwa mmadụ iji nweta Casa Bacardi $ 15 bụ ọnụahịa nke njem njegharị, njem njem akụkọ ihe mere eme and it comes with my best Part A Free Cocktail jump na-awụlikwa elu na obere ụgbọ mmiri ha na-ewe gị gburugburu ihe onwunwe Super supertropical Mgbe ahụ, na-aga na-ekiri a nkiri banyere akụkọ ihe mere eme nke Bacardi Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmata ebe a ụsụ si .. ị ga-achọpụta mgbe ahụ ị ga-ahụ? ihe omuma ihe omuma ndi ozo banyere mmalite nke Cuba ị nwere ike ịnụ ísì dị iche iche na mgbe ahụ onye ndu gị ga-akọwara gị niile ọdịiche dị iche iche ị chọrọ iji jikọta ha na n'ikpeazụ ị nwere nhọrọ ọbụna ịzụta ụfọdụ rum ahụ ị hụrụ na ezigbo ezigbo ego Dị ọnụ ala karịa ka ị ga-enweta na United States So ..
Ekwadoro m ịbịa Casa BacardiSure ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado rum.Ọ dịkwa ezigbo ezinụlọ ka ha weta ụmụakaMaka ọtụtụ ndị njem nlegharị anya na-echekwa ebe ochie San Juan JuanN'elu n'eluMa ọtụtụ amaghị na ọ bụ n'ezie meghere ọha na eze FreeTill 3pm.
Ihe ị ga - eme bụ ịgbaso ọwara ala .. banye ebe a na - eli ozu. E hiwere ya na 1863 ma n'eziokwu, ọ bụ otu n'ime ebe ili ozu kachasị mma m nwetụrụla na ndụ m. Ebe a dị n'akụkụ mmiri ma ị ga - ahụ ọtụtụ ihe ọkpụkpụ n'ime ụfọdụ ebe izu ike ama ama ama ama Puerto Rico nọ ebe ahụ Ma ọ bụ ebe dị mma ịga, sịnụ, nkeji 15 ma ọ bụ 20.
N’ebe udo dị. O doro anya na-asọpụrụ, ọ dị mma na El Morro, n'ihi ya, ọ bụ ebe zuru oke iji gaa otu n'ime ogige ndị ama ama nke San Juan, ikekwe ama ama ama ama ama na San Juan, bụ ogige abụọ, San Felipe del Morro, na San Cristobal, na m Aga m enye gị nnukwu ọnụ gaa ileta ebe ndị a gbalịa ka ị gaa n'ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie mgbe anyanwụ dara nke ukwuu n'ihi na ọ dị ọkụ na San Juan, ị ga-ekele m n'ihi na enwechaghị ndò n'ime , gbakwunyere na ọ bụ $ 7 ịbanye ma You nwere ohere maka ogige abụọN'ihi na awa 24Anyị na-amalite na El MorroRight b n'azụ m Ọ bụ ndị Spen wuru ya na 1539Nke a chebe ndị Spen site na ndị omekome site n'oké osimiri Ọ dị obere karịa San Cristobal can nwere ike ịmụ ọtụtụ akụkọ ihe mere eme n'ime ou nwere ike ịgwa ndị na-eche nche okwu ma n'ezie nke ahụ bụ na Oké Osimiri na-ahụ oke ọhụụ dị ka onye agha Spain maka ele anya n'oké osimiri Mgbe ahụ anyị nwere San Cristobal nke wuru na 1634Ọ dị atọ ma ọ bụ ya bụ ebe kachasị elu e wusiri ike na America na SanCristobal yo ị nwere ike ịnọ ọtụtụ oge karịa El MorroỌ bụ naanị nnukwu ma enwere ebe ụfọdụ ebe m na - anaghị ahụ ndị ọzọ, ọ dị m ka m nwere ebe ewusiri ike nye onwe m. Ọ bụ ihe na - atọ ụtọ ịgagharị na ile anya na windo ịbụ akụkụ nke akụkọ ọzọ Ma n'ezie. Ikwesiri ileta ulo elu abuo.
Ọ bụ ihe dị ka ije ije 25-30 iji ruo ebe ahụ, tụkwasa m obi ọ nwere ike ịbụ otu n'ime isi ihe njem gị gaa San Juan, ọ bụrụ na ị na-achọ ndụ abalị na Old San Juan Aga m agwa gị otu ihe ahụ dị ka nke gị Uber ọkwọ ụgbọala ga-agwa gị Nduzi gị ga-agwa gị Gaa na La FactoriaỌ nwere ike ọ bụrụ na ị maara gị nke ọma n'ihi na ejiri ya dịka otu n'ime ebe eserese maka isiokwu egwu Despacito, ị nwere ike ịnụ abụ ahụ Na maka ebumnuche agụmakwụkwọ m ga-anwale ụfọdụ n'ime ha cocktails na-ahapụ Ha na-agwa m na ha na-ebi ndụ ruo aha $ 10 ma ọ bụ na-erughị ike, ụfọdụ n'ime ihe kasị mma cocktails m na nwere na a n'ezie ogologo oge Gụnyere a mma mojito na ngwụsị izu ha nwere 6 ụlọ dị iche iche na-emeghe ụfọdụ na egwu egwu n'oge Izu anyị nọrọ ebe ahụ bụ naanị ụlọ 3 mana ikuku ka dị ezigbo mmaNke a bụ ebe ị na-aga na agadi san juan Kwa abalị ọ bụla n'izu Tụkwasị m obi to ga-eme atụmatụ nkwụsịtụ na Calle Loiza na njem gị na San Juan nke ihe kpatara nke a bụ mpaghara hipster nke obodo ahụ Aga m enye gị ebe ole na ole ị ga-enyocharịrị. Nke mbụ ga-abụ: Libros Libres, nke pụtara akwụkwọ n'efu na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ọ bụ. A obere nkuku .. ebe a ga-enwerịrị ọtụtụ narị akwụkwọ n'efu.
Naanị na-eche ka ị lelee ha. Nkwụsị ọzọ ga-abụ La Cueva Del MarGuys, agam agwa gị na ndị a bụ ụfọdụ azụ tacos kachasị mma m nwetagoro n'ime ogologo oge mgbe ịchọrọ nsogbu nsogbu azụ gị mgbe ị nọ San? Juan N’ikpeazụ zute ya ma ọ bụrụ na ị bụ onye biya biya, enwere m ọtụtụ ndị obodo ịgwa m banyere ebe a na-akpọ 'El Tap' n'okporo ámá a nwekwara ọtụtụ nkà n'okporo ámá. Good vibes Maa bịa ebe a ma ọ bụrụ na gị na San Juan nwere ọtụtụ nnukwu nri mana m ga-ekekọrịta atọ na echere m na ịmalite site na a na-akpọ Mallorca, anyị wee gaa ama ama a na-akpọ c afe ..
Mallorca na-agbalị na .. na ọ bụ ihu ọma a achịcha dị iche iche nke bụ nnọọ na powdered sugar Adriana na-mmiri riri na m hụrụ ya n'anya ozugbo.
Ọ bụ n'ezie ihe mbụ anyị riri mgbe anyị rutere San Juan. . MofongoAnyị gara ebe mara ezigbo mma nke a na-akpọ Cafe Manolin iji nwalee nke a .. ebe ahụ dị ka nri ụlọ akwụkwọ ochie SupersSuper ezigboSuper na-ewu ewu na ihe bụ mofongoIhe mbụ riri mmmmmmmN'ikpeazụ n'ihi na ọ dị oke mmiri na San Juan Echefula ị drinkụ mmanya ma ọ bụrụ na ị nweta ya ebe ọ bụla Chọta obodo Mana na Old San Juan enwere ebe akpọrọ LimbersỌ bụrụ na ịchọta ya egosiri m ya na ihuenyo Ọ na-efu naanị 75 cents ma ọ bụ ice a gbajiri agbajiDị iche iche ụtọSo ume ọhụrụOtu ọgwụgwọ zuru oke maka ụbọchị dum ị na-agagharị Placita de SanturceOtu n'ime nhọrọ abalị kacha mma maka gị bụ naanị nnukwu oriri na ọWụWụ site na ịga nke ọma Ndị na-eri nri na-eri nri Ogwe ka ị beerụọ biya ma ọ bụ ị cockụ mmanya na-a yourụ ihe ọ drinkụ toụ gị ịga ma nwee egwu dị egwu Nke a bụ otu n'ime ebe kachasị mma n'obodo iji nwee oriri. tinye nke a na ndepụta gị Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịpụ n'abalị Tụkwasị m obi ndị mmadụ na-agwa m na nkọwa ndị dị n'okpuru ma ọ bụrụ na atụfuru m ihe ọ bụla na San Juan I ' m n'ezie na-achọsi ike Enwere m olileanya na ị nwere obi ụtọ na ntuziaka a Daalụ maka ikiri ka m na-ahụ gị oge niile
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji gbaa ịnyịnya ígwè gburugburu Puerto Rico?
Anyị kọwara na anyị bụbiking gburugburuagwaetiti niile - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 400 na ụbọchị 10 - ike agwụbeghịkwa anyị.22bọchị 22 2019
Nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè gburugburu San Juan?
NaSan Juan,ị nwere ikenọkwasị n'elu ẹkedọhọdeigwe kwụ otu ebeụzọ gasị n'okporo ámá ndị bụ isi, okporo ụzọ ndị mara mma, simenti, na osisi ndị e ji osisi rụọ, na ọmarịcha ụzọ ájá.
Kedu kilomita ole ọ gbara gburugburu Puerto Rico?
Isi agwaetiti Puerto Rico dị ihe dị ka 110 kilomita (177 km) ogologo (ọdịda anyanwụ ruo n'ebe ọwụwa anyanwụ) na 35 kilomita (56.3 kilomita) obosara (ugwu ruo n'ebe ndịda), na mkpuchi3,515square kilomita (9,104 square kilomita) - nke dị ntakịrị karịa ugboro atọ karịa Rhode Island, dị ka Central Intelligence Agency si kwuo.26.10.2017
Ọhụrụ na Puerto Rico na ejighi n'aka esi enyocha ya n'ebube ya niile? Ọfọn, enweghị mgbakasị ahụ, Thrillist nwere gị n'azụ gị, ị kwesịrị ịma na tupu ị gawa, ndị enyi gị gosipụtara na Expedia. Puerto Rico mbipụta. Ihe mbu mbu, ikwesiri iru ebe ahu.
nwoke g’enwere ike gbawara umunwanyi ije n’ụzọ ndi nwanyi
Agwaetiti ahụ nwere ọdụ ụgbọ elu abụọ, awa abụọ na ọkara site na Miami, Luis Munoz Marin International Airport dị nso na San Juan. Ma ọ bụ gbaga na ọdụ ụgbọ elu mba Rafael Hernandez maka nnweta dị mfe nke ọtụtụ obodo ndị na-agba agba na agwaetiti. Ozugbo ị ruru ala, e nwere ụzọ dị iche iche dị iche iche ị ga-esi gaa ma chọgharịa.
Mana ịgbazite ụgbọ ala bụ ụzọ kacha mma. Kwọ ụgbọala na Puerto Rico nwere ike ịtụ ụjọ, mana ọ bụ ụzọ kachasị ọsọ, ụzọ kachasị mma iji malite ịgagharị na agwaetiti ahụ niile. Nke a bụ ndụmọdụ ndụmọdụ: gbaa mbọ zụta ụgbọ ala siri ike ka ị nwee ike ịga ụfọdụ ụzọ okporo ụzọ siri ike ma pụọ ​​n'okporo ụzọ a kụrụ akụ.
Na-ekwu okwu nke kwụsịrị amia track, ị ga-ahụ El Yunque Rainforest. Elu na Sierra de. emi odude ke Obot Luquillo.
Ọ bụ otu n'ime mmiri ozuzo ole na ole na United States. Nwekwara ike ịgbanye Toro Verde Adventure Park, bụ nke a na-akpọ zipline kachasị ogologo n'ụwa na ụkwụ 8,300 mara mma ogologo nke bọọlụ 28. Ka na-achọ ọsịsọ adrenaline? Gaa na Domes Beach dị na Rincon.
Otu n'ime ihe ndị kasị ama sọfụ tụrụ na agwaetiti, nri n'etiti laithaus na-adịghị arụ ọrụ nuklia chernobyl. Ndị a bụ ụfọdụ ebili mmiri kachasị ike ị ga-ezute, ya mere ọ bụ naanị maka ndị nwere ahụmịhe nwere ahụmahụ karịa ụmụaka. Ọ dị mma, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụ? Echegbula.
Thelọ akwụkwọ Rincon Surf dị na Sandy Beach ma na-enye ihe ọmụmụ otu na nke onye ọ bụla maka ọkwa niile nke oke osimiri na-akpọ aja aja ọcha dị ọcha nke Culebra. Naanị kilomita 30 n’ebe ọwụwa anyanwụ nke Puerto Rico. Jiri njem ụgbọ mmiri mee njem otu ụbọchị ma gaa njem mmiri mmiri na Flamenco Beach.
Osimiri Tamarindo dị nso. Ebe ọzọ mara mma maka snorkeling na turquoise mmiri. Dezie osimiri, aụọ ihe ọ andụ drinkụ ma zuru ike na El Bohio, nnukwu obere mmanya a na-agaghị echefu, zuru oke maka ndị mmadụ na-ele ma na-eme ka ihe ọ drinkụ drinkụ nke Puerto Rico na-a drinkụ, aha ọjọọ pina colada na-atọ ụtọ mmiri ara ehi mmiri ara ehi dị n'ọtụtụ ebe na Puerto Rico.
Ma ebe omumu kwesiri ibu Barranchina ma obu Caribe Hotel, ma gi kpebie. Na-achọ ọbụna karịa nri Puerto Rican? Gaa Leta Lechoneras dị na Guavate, ma ọ bụ dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ ha The Pork Highway, Lechoneras bụ ebe a na-eri nri n'èzí na-ahụ maka ezì niile na-esi ísì ụtọ nke ji nwayọ ghee ọkụ na-emeghe, okporo ụzọ ahụ nwere usoro Lechoneras. Ga-achọ ịnọ ebe ahụ n’oge, dị ka etiti ehihie.
Chọta ebe a na-adọba ụgbọala ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka ebe ị na-adọba ụgbọala wee guzo n'ahịrị maka anụ ezi. Nnukwu efere anụ ezi na-ere ọkụ na-agba naanị dollar asatọ na iri. Na-achọkwu azụmahịa? Otu ụzọ dị mma iji ruo agwaetiti a bụ bọs.
Ejiri Autoridad Metropolitana de Autobuses, nke a bụ ụdị njem kachasị ewu ewu na Puerto Rico. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgagharị n'ụzọ dị mfe ma dịkwa ọnụ ala, were ụgbọ ala maka naanị 75 cents n'ụzọ ọ bụla maka ọnụahịa a kara aka. Ga-ahụ tụrụ bụ yi n'okporo ámá ndị Old San Juan.
Anyị na-echekwa agadi. Old San Juan bụ otu n'ime obodo ndị kacha ochie na Western Hemisphere. Mpaghara mbụ nke ndị Spen biri, ebe a ị nwere ike ịhụ mmetụta ndị ọchịchị nke okporo ụzọ cobblestone na ụlọ agba agba.
Nwere ike ịga njem nlegharị anya na-eduzi ma ọ bụ chọpụta ya n'onwe gị. Ma echefula San Cristobal Castle. Ebe a e wusiri ike bụ obodo kasịnụ ndị Spen wuru iji chebe ógbè ha.
Ọ gafere okpukpu isii na ala iri abụọ na asaa, echiche nke Oké Osimiri Atlantic bụ n'ezie epic. N’agbanyeghi njem obula ichoro, ijide n’aka na ichoro ihe nlere anya, osimiri mara mma, na nri ndi nke uto gi agaghi echefu. (no sound) (no sound) (no sound) (no ụda) (no ụda) (no ụda) (no ụda) (no ụda) (no ụda) (no ụda) (no ụda) (no ụda) (mba .
Ụda) (enweghị ụda) (enweghị ụda) (enweghị ụda) (enweghị ụda) (enweghị ụda) (enweghị ụda) (enweghị ụda) (enweghị ụda) (enweghị ụda) Go na-aga ', Puerto Rico, ọkọnọ Denye aha na Thrillest maka ndụmọdụ ndị ọzọ ma dobe anyị akara na nkwupụta ma ọ bụrụ na ị chere na anyị efunahụ ihe.
Nwere ike isi ụgbọala si USA gaa Puerto Rico?
Ensmụ amaala nke United States na-agagharịPuerto Ricochọrọ naanị ụdị gọọmentị ewepụtara maka njirimara foto maka na ha agaghị ala mba ọzọ. Formsdị NJ ndị a nabatara gụnyere ikikere ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ kaadị ID foto nke aU.SNgalaba nke ugbo ala.Eprel 18 2018
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji gbaa ya gburugburu agwaetiti Puerto Rico?
Ọna-agagharị5 1/2 ruo awa asaa nagbaa ya gburugburuiheagwaetiti nke Puerto Rico. Naagwaetitibụ 100 site 39 kilomita, yana ebe gbara 278 kilomita. Onu ogugu ososo bu 55 kilomita kwa awa dika nke 2015.
You nwere ike ịnyịnya ígwè si Condado gaa Old San Juan?
Obodoawade mma ẹkedọhọdeigwe kwụ otu ebena ịzọ ije n'okporo ụzọ ka ezinụlọ niile nwee ọ enjoyụ. Ihe niile na-amalite site na akwa mmiri jikọtaraOchie San JuankaObodo, Puente Dos Hermanos. Avenida Ashford, okporo ama ama ama ama maka ndi njem nleta na ndi nleta na enye ndi mmadu akaraigwe kwụ otu ebempaghara n'akụkụ aka nri na-aga n'ebe ọwụwa anyanwụ.
Nwere ike isi ụgbọala si Puerto Rico gaa United States?
Mụ amaala nkeUnited Statesna-eme njemPuerto Ricochọrọ naanị ụdị gọọmentị ewepụtara maka njirimara foto maka na ha agaghị ala mba ọzọ. Formsdị NJ ndị a nabatara gụnyere ikikere ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ kaadị ID foto nke aU.SNgalaba nke ugbo ala.Eprel 18 2018
Ogologo oge ole ụgbọ elu na-aga Puerto Rico?
Ogologo oge ole ka ụgbọ elu na-aga Puerto Rico? Ná nkezi, nkwụsịụgbọ elusite na United States naPuerto Ricoewe 5h 15m, na-ekpuchi anya nke 1951 kilomita.
Kedu ọnwa dị ọnụ ala iji fega Puerto Rico?
Ndụmọdụ kachasị elu maka ịchọta ọnụ alaụgbọ elu na Puerto Rico. Detuo ma ọ dịkarịa ala izu 1 tupu ịpụ iji nweta ọnụahịa dị ala. A na-ahụta oge dị elu ka ọnwa Jenụwarị, Nọvemba na Disemba. Naọnụ ala dị ala iji fega Puerto Ricobụ August.
Enwere m ike iji ekwentị m na Puerto Rico?
A: Ọ bụrụ na ị na-agagharịPuerto Ricodị ka onye America ịkwesighijiriatụmatụ mba ụwa-USekwentịatụmatụ na-arụ ọrụ otu ihe ahụPuerto Ricodika hameena ala. Imirikiti ndị na-ebu ụgbọ (gụnyere Verizon na AT&T) anaghị akwụ ụgwọ maka ịgagharị maka olu na ọrụ ederede.10.05.2021
Vuelta Puerto Rico ọ bụ karịa ịgba ígwè?
Vuelta Puerto Rico ga-agba gburugburu agwaetiti nke nwere ọnụ ọgụgụ karịrị nde mmadụ 3, ha niile nwere obi ụtọ ịnabata ihe omume a pụrụ iche. Maka oge mbụ, na 2020, ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịtụle ugbu a ịkọkọrịta ahụmịhe a na ndị ọzọ na-abụghị ịgba ịnyịnya ibu! Sonyere anyị ma chọpụta ihe mere Vuelta Puerto Rico ji karịa ịgba ịnyịnya!
bikemụaka igwe kwụ otu ebe
Kedu mgbe ị ga-edebanye aha maka Vuelta Puerto Rico?
Ndebanye aha meghere March 1st! Vuelta Puerto Rico ga-agba gburugburu agwaetiti nke nwere ọnụ ọgụgụ karịrị nde mmadụ 3, ha niile nwere obi ụtọ ịnabata ihe omume a pụrụ iche. Maka oge mbụ, na 2020, ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịtụle ugbu a ịkọkọrịta ahụmịhe a na ndị ọzọ na-abụghị ịgba ịnyịnya ibu!
Ego ole ka ndị Puerto Rico buru?
Vuelta Puerto Rico ga-agba gburugburu agwaetiti nke nwere ọnụ ọgụgụ karịrị nde mmadụ 3, ha niile nwere obi ụtọ ịnabata ihe omume a pụrụ iche. Maka oge mbụ, na 2020, ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịtụle ugbu a ịkọkọrịta ahụmịhe a na ndị ọzọ na-abụghị ịgba ịnyịnya ibu!